SBS Somali | Listen to Podcasts On Demand Free | TuneIn
Barnaamijkan todobaadlaha wuxuu idiin soo gudbin wararkii dalka, dibada iyo Somalia oo faahfaahsan kaasoo ay la socoto warbixin ay wariyayaashayadu nooga soo gudbiyaan qeybaha kala duwan ee Somalia.
UN envoy fails to resolve Jubaland election deadlock - UN envoy fails to resolve Jubaland election deadlock
Waftigii beesha caalamka oo sida la sheegay ku guulaysan wayday inay xaliyaan khilaafka doorashada Jubaland. - Waftigii beesha caalamka oo sida la sheegay ku guulaysan wayday inay xaliyaan khilaafka doorashada Jubaland.
Habon Mohamed shares her difficult life story - Habon Mohamed shares her difficult life story
Habon Mohamed waa hooyo Soomaaliyeed oo degan Melbourne. Waxay soo martay nolosheeda dhibaatooyin badan. - Habon Mohamed waa hooyo Soomaaliyeed oo degan Melbourne. Waxay soo martay nolosheeda dhibaatooyin badan.
How to resolve electoral deadlock in Jubaland with Mohamed Caalim - How to resolve electoral deadlock in Jubaland with Mohamed Caalim
Muranka doorashada Jubaland iyo Mohamed Caalim. - Muranka doorashada Jubaland iyo Mohamed Caalim.
How to break the Jubaland election impasse with Abdi hersi - How to break the Jubaland election impasse with Abdi hersi
Sidee xal loogu heli karaa ismaandhaafka Jubaland? Waxaa nala falanqaynaya Dr Cabdi Xirsi - Sidee xal loogu heli karaa ismaandhaafka Jubaland? Waxaa nala falanqaynaya Dr Cabdi Xirsi
Sydney knife attack - Sydney knife attack
Wararkii u danbeeyay weerarkii Sydney - Wararkii u danbeeyay weerarkii Sydney
ONLF declared ceasfire year ago Today - ONLF declared ceasfire year ago Today
Ururka ONLF wuxuu xabad joojin ku dhawaaqan maantoo kale sanad ka hor - Ururka ONLF wuxuu xabad joojin ku dhawaaqan maantoo kale sanad ka hor
Somali minister of religious affairs "It was first time pilgrimage visas was issued in the country"
Wasiirka awqaafta iyo arimaha diinta oo sheegay in markii u horeeyay ay xujaydu fiisooyinka ka qaateen dalka gudihiisa.
Security officials warn traditional elders who obeyed Al-Shabaab's call to "Repent"
Saraakiil ka tirsan dawlada federalka oo u digay oday dhaqameedyo fuliyay amar ay Al-shabaab soo saartay.
More migrants could be deported under new proposal - More migrants could be deported under new proposal
Soogalooti badan ayaa wajahaya in la tarxiilo haddii hindise cusub hirgalo - Soogalooti badan ayaa wajahaya in la tarxiilo haddii hindise cusub hirgalo
Somali cultural artifacts held at customs - Somali cultural artifacts held at customs
Alaabta hidaha iyo dhaqanka Soomaalida oo lagu haysto kastamka Melbourne. - Alaabta hidaha iyo dhaqanka Soomaalida oo lagu haysto kastamka Melbourne.
Puntland marks 21st anniversary with marches in Garowe - Puntland marks 21st anniversary with marches in Garowe
Puntland oo u dabaaldegtay 21 guuradii kasoo wareegtay asaaskii Maamulka, iyadoo gaardis lagusoo bandhigay caasimada Garowe. - Puntland oo u dabaaldegtay 21 guuradii kasoo wareegtay asaaskii Maamulka, iyadoo gaardis lagusoo bandhigay caasimada Garowe.
Community views on President Farmaajo's renunciation of his US citizenship - Community views on President Farmaajo's renunciation of his US citizenship
Sidee u arkaan in madaxweyne Farmaajo ka tanaasulay dhalashada Maraykanka jaaliyada Soomaalida Australia - Sidee u arkaan in madaxweyne Farmaajo ka tanaasulay dhalashada Maraykanka jaaliyada Soomaalida Australia
Calls to boycott the Hajj
Baaqyo lagu doonayo in la qaadaco Xajka sanadkan.
Tributes to mayor of Mogadishu as president orders flags at half-mast - Tributes to mayor of Mogadishu as president orders flags at half-mast
Waxaa socda tacsida iyo baroordiiqda duqii magaalada Muqdisho Injineer Yariisow. - Waxaa socda tacsida iyo baroordiiqda duqii magaalada Muqdisho Injineer Yariisow.
Online safety for children - Online safety for children
Amaanka internet ka iyo caruurta - Amaanka internet ka iyo caruurta
Employment challenges faced by Somali graduates seeking work. - Employment challenges faced by Somali graduates seeking work.
Caqabadaha haysta ardayda wax ku baratay dalalka dariska la ah Soomaliya markay dalkoodii dib ugu noqdaan oo shaqo raadsadaan. - Caqabadaha haysta ardayda wax ku baratay dalalka dariska la ah Soomaliya markay dalkoodii dib ugu noqdaan oo shaqo raadsadaan.
India Muslim divorce bill - India Muslim divorce bill
Sharciga furitaanka Muslimiinta Hindiya - Sharciga furitaanka Muslimiinta Hindiya
Polish educated Dr Yahie Haji Ali on investment opportunities - Polish educated Dr Yahie Haji Ali on investment opportunities
Dr Yahie Haji Ali oo ka waramaya fursadaha maalgashi ee ka jira dalka. - Dr Yahie Haji Ali oo ka waramaya fursadaha maalgashi ee ka jira dalka.
Polish educated Dr Yahie Haji Ali on life in Eastern Europe - Polish educated Dr Yahie Haji Ali on life in Eastern Europe
Dr Yahie Haji Ali oo wax kusoo bartay Poland ayaa ka waramay nolosha dalalka Bariga Yurub. - Dr Yahie Haji Ali oo wax kusoo bartay Poland ayaa ka waramay nolosha dalalka bariga Yurub.
Latest on Mogadishu suicide attack - Latest on Mogadishu suicide attack
Wararkii u danbeeyay ismiidaamintii ka dhacay Muqdisho. - Wararkii u danbeeyay ismiidaamintii ka dhacay Muqdisho.